Ny fiasan'ny Google Secure Folder | Androidsis
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, Android cheat
La Secure Folder rehefa mampiasa azy ianao dia tsy afaka miaina tsy misy azy intsony ary izany no mitranga amin'ilay natombok'i Google Files andro vitsy lasa izay. Raha ny marina dia hanazava ny fomba hampiasana azy sy ny fomba hananana azy io amin'ny fampiharana anao izahay, satria tsy manana an'io ny kinova ankehitriny ao amin'ny Play Store.
Folder azo antoka izay ao amin'ny Samsung Galaxy farany ambony dia iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra io amin'ny fiarovana an'i Knox ary amin'ny fitaovana hafa dia ao an-tsaintsika ihany koa ny zava-mitranga amin'ny finday Huawei. Ankehitriny i Google dia mandeha amin'ny sombiny hizara izany traikefa izany ary manana ny rakitra, sary na horonan-tsary manokana na saropady any. Ataovy.
1 Ahoana ny fananana ny Google Files Secure Folder
2 Ahoana ny fampiasana ny Folder File Secure an'ny Google
3 Ahoana ny fomba famindrana na "fanesorana" fisie amin'ny Secure Folder
Ahoana ny fananana ny Google Files Secure Folder
Raha manavao ny tsimbadika farany an'ny Google Files isika dia tsy hahita ity zava-baovao ity amin'ny fampiharana iray izay mampiavaka azy hadio hatrany ny finday. Raha ny marina dia mila mankany amin'ny tahiry APKs isika mba hisintomana ny kinova farany izay miaraka amin'ny Secure Folder.
Izany no kinova 1.0.325551336 izay hampiasainay hampianatra anao hampiasa Folder Files azo antoka an'ny Google sy izay azonao atao amin'izany:
marary mitsika: Files avy amin'i Google 1.0.325551336 APK
Folder azo antoka azo antoka ao amin'ny Galaxy toy ny Note 10+ ary efa nataonay manokana ny sasany fa tsy ny iray hafa hanome anao fantaro ny ao anatiny rehetra. Ambonin'ny zava-drehetra tsy ho an'ny afaka manafina sary, antontan-taratasy na fisie, fa satria mamela anao hametraka fampiharana ao aminy ihany koa. Izany hoe, afaka manana kaonty Instagram izahay amin'ny fotoana iray ihany amin'ny kaonty Google anao. Izany dia toy ny fananana rafitra miasa ao anatin'ny iray hafa.
Ary eto miova ny zavatra amin'ny Google, satria amin'izao fotoana izao dia tonga ny kinova voalohany an'ny Secure Folder an'ny Google Files miaraka amin'ireo zavatra ilaina mba hahafahana manafina rakitra na rakitra tadiavintsika, saingy tsy misy bebe kokoa.
Raha vantany vao tafapetraka ny fanavaozana ny Google Files APK dia handeha amin'ny tabilao "Hizaha" hita eo ambany izahay. Hitantsika eto mijanona eo ambany ny sokajy fisie rehetra mitadiava bokotra iray natokana ho an'ny Secure Folder ary hita hatramin'ny fotoana voalohany.
Raha tsindrio ny Folder azo antoka handeha amin'ny efijery iray izay tsy maintsy hamoronana PIN 4-digit isika ary izany dia hanampy antsika hampiditra na "hanala" ireo rakitra tadiavinay ao amin'ilay Secure Folder. Izany hoe mihidy amin'ny PIN isika izay hahafahantsika hanana izay rehetra tadiavintsika amin'ny toerana azo antoka.
Vantany vao noforonina ny PIN, handeha mivantana any amin'ny Secure Folder izahay hahita fa tsy manana na inona na inona ao isika. Avy amin'ity varavarankely ity dia tsy afaka manampy rakitra an-tanana izahay, izay tsy mitovy amin'ny Samsung Secure Folder izay ahafahanao manampy rakitra na rindranasa miaraka amin'ny fampiononana rehetra eto an-tany.
Ahoana ny fomba famindrana na "fanesorana" fisie amin'ny Secure Folder
Ny lalana tokony hataontsika ampio rakitra ao amin'ny Folder Safe Google Amin'ny alàlan'ny browser ny fampiharana. Izany hoe, avelantsika ny Folder Secure ary hizahantsika ny fampirimana Downloads mba hanaovana gazety lava ary avy amin'ny menio izay vokarina amin'ny fipihana eo amin'ny kisary misy teboka telo mitsangana, dia afaka mahita ny safidy "Mifindra amin'ny Secure Folder ".
Voafantina, ny ny rakitra dia mankany amin'ny Secure Folder hahafahana mitarika antsika aminy rehefa miditra PIN indray; Eto isika dia afaka manadino mandritra ny fotoana fohy io safidin'ny kinova Samsung mamela antsika hiditra amin'ny Secure Folder io raha mbola tsy nanidy ny telefaona isika. Manantena izahay fa afaka manatsara ny endriny i Google.
Para esory ireo rakitra avy amin'ny Secure Folder hanaraka an'io fomba io ihany izahay fa avy amin'ny fisie ao anatiny. Ary noho izany dia azontsika atao ny mampiasa ny Secure Folder an'ny Google Files ary izany dia ho mora raisina mba hitazomana tsara ireo antontan-taratasy. Ankehitriny, raha te-handeha amin'ny sehatra hafa ianao, satria ny telefaona manaraka dia efa fantatrao hoe inona ilay marika tokony hananany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fampiasana ny Folder File Secure an'ny Google
Hamafiso fa mandeha tsara ny famandrihana haingana amin'ny findainao